मलेसिया बाट ‘नयाँ कामदारको माग आएको हो की होईन ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
मलेसिया बाट ‘नयाँ कामदारको माग आएको हो की होईन ?
मलेसियाले नयाँ कामदार लिने प्रक्रिया अगाडि नबढाएको पाइएको छ । नेपाली दूतावासले नयाँ कामदार लिने प्रक्रिया अघि बढिनसकेको जनाएको छ । दूतावासलाई नयाँ कामदार लिने सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी नआएको दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।
‘नयाँ कामदार लिने प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले भ्रममा नपर्न यो जानकारी गराइन्छ,’ दूतावासले भनेको छ । कामदारको माग प्रमाणीकरण भएको भन्‍ने गलत सूचना प्रवाह भएको भन्दै दूतावासले आपत्ति जनाएको छ । तर, पुराना भिसाको समय भएका कामदारलाई सात दिन क्वारे’न्टी’नमा बस्ने गरी अध्यागमन विभागबाट अनुमति पाइरहेका छन् ।
नयाँ कामदार आउन सक्ने कुनै पनि जानकारी नआएको दूतावासले जारी गरिएको विज्ञप्‍तिमा प्रस्ट पारेको छ । मलेसियाले को’भि’ड-१९ को महा’मारी सुरु भएपछि सन् २०२० मार्च १८ देखि मुलुक प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य पनि पुनः सुरु भएको छैन ।
मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य सुचारु हुनासाथ जानकारी गराइने दूतावासले बताएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण हुनसाथ कामदार छनौट प्रक्रिया अघि बढ्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई जानकारी पुग्‍ने छ ।